Yiziphi Izikhumbuzo Ozoziletha Ohambweni? | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ikhambo Tips > Yiziphi Izikhumbuzo Ozoziletha Ohambweni?
Ngabe uyalukhumbula lonke uhambo owake waluthatha, imibono oyithandile, nokudla okunambithile? Mhlawumbe hhayi, futhi yingakho izikhumbuzo ziyindlela ephelele yokwenza lezo zinkumbulo zihlale impilo yonke. Yiziphi izikhumbuzo ozoza nazo ohambweni? Nayi imibono emihle kakhulu yokukhumbula ukuletha ucezu lwepharadesi ekhaya.
Izikhumbuzo Ozoziletha Ohambweni: Izithako Zokupheka
Izinongo, usoso, amakhambi, kuzokubuyisela emuva kuma-flavour, iphunga, nezikhathi zaleyo ndawo ekhethekile. Kuyafakazelwa ukuthi sikhumbula kakhulu ngezinzwa zethu, futhi ukudla kuyindlela engcono kakhulu yokuzwa indawo. Ngaphezu kwalokho, izithako zokupheka zizokwenza abangani bakho nomndeni wakho bazizwe bebekhona nawe.
Amakhambi amaShayina, i-pasta sauce, futhi ne-pasta yizikhumbuzo ezinhle zokubuyisa kusuka ohambweni oluya eChina, noma e-Italy, Ngokwesibonelo. Ngakho, khumbula ukupakisha isikhwama esingezelwe ama-foodies kuphela, ngoba kungcono ukupakisha lezi zikhumbuzo ezimnandi ngokuhlukile. Ngeke ufise ukuvula ipotimende ukuze uthole ukuthi izingubo zakho zise-shades ezibomvu ze-paprika.
Ukusekela isiko lendawo nabaculi kukhombisa ukuthi ungumhambi ocabangayo futhi ohlakaniphile. Izitsha zesoso ezipendwe ngesandla, izingubo zetafula ezilukiwe, noma amahembe entambo afekethisiwe ayizikhumbuzo ezinhle abangane bakho abazozazisa, ukusetshenziswa, kanye nendlela enhle yokukhombisa ukubonga kwakho emphakathini okugcinile.
Ubuciko bendawo buyisikhumbuzo esihle sokubuyisa kusuka kunoma yiluphi uhambo eYurophu naseChina. EChina, ungathola izibani ezibomvu zenhlanhla, kusuka eRussia a ngezandla Domovichok ezogada ikhaya lakho noma ingilazi kabhiya epholile evela ePrague kumalume noma umfowenu othanda ubhiya. Umbuthano omkhulu kanjani travel eco-friendly, ukwamukela, nokusabalalisa isiko elihle emhlabeni wonke.
Ikhaya Decor Souvenirs
Yenza uhambo lwakho lube yingxenye yekhaya lakho, nembali enhle iDelft vase noma i-tulip yokhuni evela eNetherlands. Izikhumbuzo zokuhlobisa ikhaya zingenziwa ngezandla, futhi kaningi sizokhuluma izindaba zamasiko nomlando wemvelaphi yazo.
Ipuleti lobumba odongeni, i-crystal bohemian evela eCzech Republic, noma amawashi e-cuckoo avela ku- Black Forest ziyizikhumbuzo ezinhle zokuletha ekhaya kusuka ohambweni lwakho oluya eYurophu.
Isikhumbuzo Sokuletha Ohambweni: Utshwala Bendawo
Ukwabelana ngezindaba kusuka ohambweni lwengilazi yotshwala obuhle kusiza ukukhumbuza yonke imininingwane enamanzi, nezikhathi zobumnandi. Ukuletha utshwala bendawo kuyisikhumbuzo esidumile sokuletha kusuka eYurophu, ikakhulukazi uma kuyi- isiphuzo esidakayo sonke kufanele sizame umhlaba wonke.
Ngakho, Limoncello wase-Italy, noma iRiesling wine ephuma esigodini saseRhein eJalimane, noma kunjalo, abamukeli bazojabula ukuthola isipho esinjalo. Uma ungenaso isiqiniseko sokuthi siyini isiphuzo sendawo, naka izingilazi ezisetafuleni labantu bendawo ngesikhathi sedina noma ubuze kubha yendawo.
Ubucwebe buyindlela emangalisa yokuhamba ngohambo lwakho eduze kwenhliziyo. Umgexo odlayo, amacici enhlaka avela ePoland, noma isongo elihehayo lesiliva, yizicucu ezingapheli esitayeleni, ngaphezu kwalokho, aziphelelwa yisikhathi.
Ngakho, uma uzimisele ngokuletha izikhumbuzo ezingavamile, khona-ke ubucwebe buphelele. Ukungeza intelezi kusongo lwakho oluvela kuwo wonke amazwe ukuvakasha kuyamangalisa. Nokho, lapho uthenga ubucwebe kwelinye izwe, qaphela ukuphatha imali futhi ungangeni kunoma iyiphi imikhonyovu ethandwayo yokuhamba emhlabeni wonke.
Khohlwa okhiye bamakhadi namakhadi eposi, uma abangane bakho bengabaqoqi, akukho okushoyo ukuthi Ngikhathalela ngaphezu kwengcezu eyingqayizivele abangayengeza eqoqweni labo. Wonke umuntu uqoqa okuthile: inkomishi kabhiya ehlotshisiwe evela ePrague, Ukuqoshwa kwengilazi kaMurano, I-Babushka yaseRussia kumfanekiso onodoli, futhi lezi yizibonelo ezimbalwa nje.
Ngaphezu kwalokho, izibuko zokudubula, izigqoko, nezikhonkwane kungenye yesikhumbuzo esesabekayo sokuqoqa okubuyisa ohambweni oluya eYurophu. Ulungiswe odongeni, esetshenziswa emaphathini, noma kugcinwe ku-albhamu, abangane bakho bangasazisa isikhathi osichithe ubheka leyo ngxenye eyodwa ekhethekile nendaba engemuva kwayo.
Ukuphatha okumnandi nokuhehayo kuzobeka ukumamatheka futhi kubambe ukunaka komlaleli. Ukudla kuyindlela engcono kakhulu yokuzwa indawo, kuwo wonke ama-flavour umuntu aya esikweni nasezindabeni. Ngokwesibonelo, I-Parisian AmaMacarons akuzona nje izikhumbuzo ezimnandi. Futhi basabamba ingqikithi nomoya weRenaissance yaseFrance ekupheleleni kwabo, ifomu elikhanyayo futhi elihle.
Ngakho, ngenkathi ukulunywa okumbalwa kwenza lesi sikhumbuzo sinyamalale, ukunambitheka nomuzwa omangalisayo uhlala nathi kuze kube phakade. Izinzwa zethu ziyohlala zikhumbula okokuqala lapho sizama ushokoledi waseSwitzerland, nabemukeli besikhumbuzo sakho esimnandi bazokhumbula futhi. Ngamafuphi, izikhumbuzo ezimnandi ziyisikhumbuzo esimnandi sokubuyisa kusuka ohambweni oluya eYurophu.
Izikhumbuzo Ozoziletha Ohambweni: nezingubo
Ukuthenga kungenye yezinto ezinhle kakhulu ongazenza phesheya. Ungashintsha isitayela sakho, engeza into ekhethekile ekhabethe lakho njengezikhafu zendabuko ezimibalabala ezivela eRussia, ijakhethi yesikhumba evela e-Italy, futhi nokuningi. Uma uhlela ukuletha abangani bakho ingubo yokugqoka, lapho-ke kufanele wazi isitayela sabo nosayizi weqiniso.
Nokho, kunezikhumbuzo eziningi zokugqoka ongakhetha kuzo eYurophu, lokho akubandakanyi ukukhetha usayizi. IBerlin ilungele i- yezitolo vintage, Izikibha ezivela ezimakethe zomgwaqo zaseLondon, uthayi opholile ovela eParis noma e-Italy, yimibono embalwa yezikhumbuzo zezingubo ozoletha evela emhlabeni wonke.
Izikhumbuzo ZaseCliche Ozoziletha Ohambweni Oluya EYurophu
Awusoze wenza okungahambi kahle ngezikhumbuzo zakudala. Ngokwesibonelo, Abangane besipho nomndeni isihluthulelo se-Eiffel Tower, I-Matryoshka yokhuni yaseRussia, noma ama-clogs enkuni avela e-Amsterdam, lezi kuzoba yisikhumbuzo esithandekayo nesicabangayo. Ngaphezu kwalokho, ungathenga lezi zikhumbuzo zakudala zaseYurophu esikhumulweni sezindiza, noma esiteshini sesitimela, ngomzuzu wokugcina. Nokho, cabangela lezo zikhumbuzo’ intengo izobe iphakeme kakhulu esitolo sesiteshi sesitimela, kunasemzini.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo olungenakulibaleka eYurophu. Ungakwazi kalula ukuhamba ngesitimela kunoma iyiphi indawo eYurophu, ukuthenga nokujabulela ukuhamba okulula kuzokwenza amapotimende agcwele amagugu nezikhumbuzo.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “What Souvenirs To Bring From A Trip?”Kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fsouvenirs-bring-trip%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)